အကြင်နာနန်း: avast premier92014 full version free download
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကိုလာလည်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့avast premier92014 full version ဆော့ဝဲလေးတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဆော့ကို CRACK လုပ်ပြီ 2050 အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လိုင်စင်ဗားရှင်း ပါပဲ မိမိစက်ထဲမှာမရှိသေးရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် မူရင်းဆိုဒ်မှာကတော့ တစ်လစမ်းသပ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ က CRACK လုပ်ပြီးလိုင်စင်ဗားရှင်းဖြစ်အောင် လုပ်ယူပြီး 2050 အထိအသုံးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ပြုလုပ်နည်းကတော့လွယ်လွယ်လေးပါ ဆော့ဝဲကိုအောက်အရင်ဒေါင်းယူပါ ဒေါင်းလို့ပြီးရင်တော့ WinRAR ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ avast_premier_antivirus_setup.exe ဖိုင်ရယ် Avast9Premier CRACK.exe ဖိုင်ရယ်နှစ်ခုလုံးတွေ့ ပါလိပ်မယ် အရင်ဆုံး avast_premier_antivirus_setup.exe ဖိုင်ကို install လုပ်လိုက်ပါ install လုပ်ပြီးရင်တော့ ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ပါ (Setting)ကိုနှိပ်ပြီး (Torubleshooting)ကိုနှိပ်ပါ အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါလိပ်မယ် အဲနေရာမှာ Enable avast' self-defense module နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင်အောက်မှာ ok ပေးပြီး ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ Avast9Premier CRACK.exe ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ password တောင်းပါလိပ်မယ် - ZeNiX လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး installလုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ စက်ကို Restart ပေးလိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင်တော့ စောစောက Enable avast' self-defense module နေရာမှာ ဝင်ပြီးအမှန်ခြစ်ပြန်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်လိုင်စင်ဗားရှင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ
Posted by (အကြင်နာနန်း) Unknown
အကြင်နာနန်းဆိုဒ်ကို Android ဖုန်းများမှ အလွယ်တကူဝင်ရောက် ဖတ်ရှူ့ နိုင်ရန်အတွက် apk ဖိုင်လေးပြုလုပ်ထားပါသည် (offline) ဖြင့်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ် Android ဖုန်းအသုံးပြုကြတဲ့ စာချစ်ပရိပ်သတ်များအားလုံး... အောက်မှာဒေါင်းယူပြီး မိမိဖုန်းမှာ install ပြုလုပ်၍ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
သာသနာနှစ် ၂၅၅၉ ခု၊ မြန်မာနှစ် ၁၃၇၇ ခု၊ ကဆုန် လဆန်း ၁၃ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
3D Desktop Software (3)
Android USB Drivers (1)
Chat Softwares (1)
E-book PDF-Software (2)
Flash Software Download (9)
Flash Song (8)
keygen များ (2)
mobile software များ (50)
Photo software များ (15)
PhotoScape Software အသုံးပြုနည်း (2)
Player software (9)
Run Command များ (1)
software ဒေါင်းယူနည်း (1)
Video Converter Software (23)
video editing software များ (12)
wifi hack software များ (6)
Win Rar 32 bit - 64 bit. (2)
window7theme background (4)
Windows Media Player Skins ( 72 ) (1)
Zawgyi Font for Windows732bit (1)
Zawgyi Font for Windows764bit (1)
ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ (13)
ကျန်းမာရေး စာပေများ (10)
မြန်မာ E BOOK များ (7)
မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း (1)
ရှူ့ ခင်းပုံများ (1)
Facebook မှာဖတ်ချင်ရင် Like လုပ်ပါ
အကြင်နာနန်းBLOGသည် ( 10 . 14 / 2011 )စတင်ဖွင့်လစ်ခဲ့ သည်. Theme images by enot-poloskun. Powered by Blogger.